မိနျးကလေးတဈယောကျ ပွောငျးလဲသှားခွငျးမှာ အကွောငျးပွခကျြတှေ အမြားကွီးရှိနနေိုငျပါတယျ – Shinyoon
အမှောငျကို ကွောကျတတျတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျ … အခနျးကို အမှောငျခပြွီး နတေတျလာတယျ ။ ထဈခနဲရှိ မကျြရညျကတြတျတဲ့ ကောငျမလေးက သူအမွတျနိုးဆုံးအရာကို ဆုံးရှုံးသှားတဲ့အခါတောငျ မကျြရညျတဈစကျမှ မကတြော့ဘူး ။ ပနျးရောငျ အဖွူရောငျ စတဲ့အ​ရောငျတှကေို စှဲစှဲမွဲမွဲကွိုကျတတျတဲ့ကောငျမလေးက … အနကျရောငျကို တဈစိုကျမတျမတျ ၀တျတတျလာတယျ ….
မိနျးကလေးတဈယောကျ ပွောငျးလဲသှားခွငျးမှာ အကွောငျးပွခကျြတှေ အမြားကွီးရှိနနေိုငျပါတယျ ။ အပျေါယံ ကိုယျသိနိုငျမွငျနိုငျတဲ့ အကွောငျးလေးတှလေောကျနဲ့ မဝဖေနျနဲ့ ။ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့စိတျက … သငျရိုးညှနျးတမျးတှလေို ဘာပွီးရငျ ဘာလာမယျ ဘာကွောငျ့ ဘာဖွဈတယျဆိုတဲ့ တိကသြခြောတဲ့ သီအိုရီတှေ ထုတျလို့မရဘူး ။ ရငျဘတျထဲ သလေောကျအောငျ သတျခငျြနပေမေယျ့ အပွငျမှာ ပွုံးပွခငျြ ပွုံးပွတတျတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မခဈြတဲ့သူကိုတော့ ခဈြတယျလို့ မလိမျညာတတျဘူး ။
ပွောငျးလဲခွငျးတဲ့ …. မိနျးကလေးတဈယောကျက လှယျလှယျလေးနဲ့ အပွောငျးအလဲ မမွနျတတျဘူး ။ အစှဲအလနျးကွီးတယျ နောကျဆုံး မဖွဈနိုငျဘူးဆိုရငျတောငျ ဖွဈအောငျလုပျခငျြကွတဲ့ ညဥျလေးတှရှေိတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ပွောပါမယျ ။ မိနျးကလေးတဈယောကျ ပွောငျးလဲခွငျးမှာ အကွောငျးပွခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိနနေိုငျပါတယျလို့ ။
ခဈြတယျလို့​တဖှဖှပွောနတေတျတဲ့ကောငျမလေး တိတျဆိတျသှားခွငျးဟာ … တဈဖကျက ကိုယျ့ကို ပွနျပွီး မခဈြမှနျး လကျခံသှားလို့ … အရာရာကို ဂရုတစိုကျနဲ့ ပှစိပှစိပွောနတေတျတဲ့ကောငျးမလေးတဈယောကျ မကျြနှာလှဲလိုကျခွငျးက … ဘယျအရာမှာမှ အလေးထားခွငျးမခံရလို့ … အမှောငျကို ကွောကျတတျတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျက အမှောငျထဲမှာ ကွိတျပွီးငိုနတေယျဆိုတာ …နာကငျြစရာတှကေို ဖှငျ့ဟလို့ရမယျ့ နရောမရှိလို့ ။
အပျေါယံလေးနဲ့ သူက အပွောငျးအလဲမွနျလိုကျတာဆိုတဲ့စကားမြိုး ပတျဝနျးကငျြကတဈဆငျ့ပွနျပွီးကွားရတဲ့အခါ… ကြှနျမ ရှငျးပွခငျြစိတျမရှိတော့ဘူး … ကိုယျ့ရဲ့အနှီးဆုံးသော သူစိမျးတောငျ ကိုယျ့ကို နားမလညျနိုငျခဲ့တာ တခွားသူဆိုရငျတော့ ပိုဆိုးမှာပေါ့လို့ပဲ တှေးဖွဈတယျ ။ ဒီလောကျပဲ နာကငျြခံစားမနတေော့ဘူး ။
ကိုယျ့ဒဏျရာ ကိုယျပဲသိသလို ကိုယျ့အနာကိုယျပဲ ကုရမှာလဲသိတယျ … ဘယျသူမှ မစာနာနိုငျဘူးဆိုရငျတောငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နားလညျနဖေို့လိုတယျလေ … ဘယျသူမှ မယုံကွညျရငျတောငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျနဖေို့လိုတယျ … ဒါပမေယျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ … အရငျကလိုမဟုတျတော့ပဲ ပွောငျးလဲသှားတဲ့အခါ သူ့မှာ ကိုယျမသိခဲ့ မမွငျနိုငျခဲ့တဲ့ ဒဏျရာတှေ အမြားကွီး ရခဲ့လို့ဆိုတာတော့ သိထားဖို့လိုတယျ ။
အမှောင်ကို ကြောက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် … အခန်းကို အမှောင်ချပြီး နေတတ်လာတယ် ။ ထစ်ခနဲရှိ မျက်ရည်ကျတတ်တဲ့ ကောင်မလေးက သူအမြတ်နိုးဆုံးအရာကို ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါတောင် မျက်ရည်တစ်စက်မှ မကျတော့ဘူး ။ ပန်းရောင် အဖြူရောင် စတဲ့အ​ရောင်တွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲကြိုက်တတ်တဲ့ကောင်မလေးက … အနက်ရောင်ကို တစ်စိုက်မတ်မတ် ၀တ်တတ်လာတယ် ….
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားခြင်းမှာ အကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ် ။ အပေါ်ယံ ကိုယ်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေလောက်နဲ့ မဝေဖန်နဲ့ ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်က … သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေလို ဘာပြီးရင် ဘာလာမယ် ဘာကြောင့် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ တိကျသေချာတဲ့ သီအိုရီတွေ ထုတ်လို့မရဘူး ။ ရင်ဘတ်ထဲ သေလောက်အောင် သတ်ချင်နေပေမယ့် အပြင်မှာ ပြုံးပြချင် ပြုံးပြတတ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် မချစ်တဲ့သူကိုတော့ ချစ်တယ်လို့ မလိမ်ညာတတ်ဘူး ။
ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ …. မိန်းကလေးတစ်ယောက်က လွယ်လွယ်လေးနဲ့ အပြောင်းအလဲ မမြန်တတ်ဘူး ။ အစွဲအလန်းကြီးတယ် နောက်ဆုံး မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ကြတဲ့ ညဉ်လေးတွေရှိတယ် ။ ဒါကြောင့် ပြောပါမယ် ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲခြင်းမှာ အကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီး ရှိနေနိုင်ပါတယ်လို့ ။
ချစ်တယ်လို့​တဖွဖွပြောနေတတ်တဲ့ကောင်မလေး တိတ်ဆိတ်သွားခြင်းဟာ … တစ်ဖက်က ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး မချစ်မှန်း လက်ခံသွားလို့ … အရာရာကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ပွစိပွစိပြောနေတတ်တဲ့ကောင်းမလေးတစ်ယောက် မျက်နှာလွဲလိုက်ခြင်းက … ဘယ်အရာမှာမှ အလေးထားခြင်းမခံရလို့ … အမှောင်ကို ကြောက်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က အမှောင်ထဲမှာ ကြိတ်ပြီးငိုနေတယ်ဆိုတာ …နာကျင်စရာတွေကို ဖွင့်ဟလို့ရမယ့် နေရာမရှိလို့ ။
အပေါ်ယံလေးနဲ့ သူက အပြောင်းအလဲမြန်လိုက်တာဆိုတဲ့စကားမျိုး ပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးကြားရတဲ့အခါ… ကျွန်မ ရှင်းပြချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး … ကိုယ့်ရဲ့အနှီးဆုံးသော သူစိမ်းတောင် ကိုယ့်ကို နားမလည်နိုင်ခဲ့တာ တခြားသူဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးမှာပေါ့လို့ပဲ တွေးဖြစ်တယ် ။ ဒီလောက်ပဲ နာကျင်ခံစားမနေတော့ဘူး ။
ကိုယ့်ဒဏ်ရာ ကိုယ်ပဲသိသလို ကိုယ့်အနာကိုယ်ပဲ ကုရမှာလဲသိတယ် … ဘယ်သူမှ မစာနာနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်နေဖို့လိုတယ်လေ … ဘယ်သူမှ မယုံကြည်ရင်တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်နေဖို့လိုတယ် … ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက် … အရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပဲ ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါ သူ့မှာ ကိုယ်မသိခဲ့ မမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ အများကြီး ရခဲ့လို့ဆိုတာတော့ သိထားဖို့လိုတယ် ။